Booliska Jarmalka oo bilaabay baarista weraar ka dhacay dalka – Radio Daljir
Juunyo 28, 2021 7:23 b 0
Booliska Germany ayaa si weyn ugu mashquulsan inay ogaadan waxa ku qasbay wiil Soogalooti Soomaali ah oo 3 maalin ka hor dil iyo dhaawac ka geestay magaalada Wurzburg ee dhacda Koofurta Germany.
Ninkan ayay boolisku ku sheegeen 24 jir Soomali ah oo ku noolaa magaaladaas.
Wiilkaan Soomaliga ayaa la cadeeyay in 5sano ka hor uu tagay dalkaasi Germany balse uu ku fashilmay inuu helo Basaboorka wadankaasi inkastoo usoo tarxiilistiisa Somalia aysan sahlaneen maadama Wasaaradda Arrimaha Dibadda Germany ay Somalia u aqoonsantahay wadamada ay khatarta badan ay ka jiraan.
Booliska ayaa ka war dhowraya waxa kasoo baxa baaritaanka laba telfoon uu lahaa oo gurigii u deganaa laga helay, Mas’uuliyiinta baaritaan ayaa tilmaamay i n maalmo ay qaadanayso in la turjumo waxyaabaha fariin qoraaleedyada iyo codadkii la is dhaafsaday.
Booliska waxa ay aaminsan yihiin in arintaan ay ku lugyeelan doonto xagjirnimo, Goob jogayaal ayaa sheegay in wiilka markii uu dadka tooreenayay uu ku dhawaaqayay Allaahu Akbar.
Wiilkaan Jibril lagu magacabo ayaa Booliska u cadeeyay inuu soo dhameystay tababar dhinaca dagaalka kooxaha Argagexisada balse wali Booliska ma cadeenin
Qoysas ku barakacay dagaalkii Wisil & Qaramada Midoobay oo war kasoo saartay